Semalt မှ SEM မဟာဗျူဟာငါးခုကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရရှိမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း
SEM သို့မဟုတ် SEO နည်းဗျူဟာ များသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိကြောင်းနှင့်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကနားလည်သင့်သည်။ အကြောင်းပြချက်ကရှာဖွေရေး algorithms ကိုအမြဲပြောင်းလဲပစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နေသည်နှင့်အမျှစီးပွားရေးသည်အခွင့်အရေးတစ်ခုစီကိုအသုံးချသင့်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ ROI သည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် Semalt Customer Customer Success Manager Igor Gamanenko မှဒေသခံ SEO ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်အကူအညီဖြင့်ဖော်ပြသောအဆင့်ငါးဆင့်ဖြစ်သည်။
၁. ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသောအမေရိကန်များ ၀ ယ်ယူသောအမေရိကန်လူမျိုးများသည်ဖုန်းစာအုပ်များမှအင်တာနက်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒေသတွင်းရှာဖွေမှုများပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာဒေသခံဖောက်သည်များသည်လုပ်ငန်း၏ကျောရိုးကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပြီးပိုင်ရှင်များသည်လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်လိုလျှင်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Utah မှ Parsons Behle နှင့် Latimer ဥပဒေကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များမှ၎င်းတို့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် ပတ်သတ်၍ ၎င်း၏ဖောက်သည်များအားနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ဆိုက်များသို့ traffic ကိုမောင်းနှင်ရန် SEM ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကျိုးဆက်မှာသူတို့၏ site သို့အမြတ်အစွန်း။
၂။ ဒေသတွင်းဆိုဒ်များမှထွက်သောအချိတ်အဆက်များနှင့်အကိုးအကားများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်အဖိုးတန်သောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အော်ဂဲနစ်တည်ရှိမှုနှင့်ဒေသတွင်း SEO မှလွှဲပြောင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုတိုးတက်စေသည်။ ဂူဂဲလ်၏ရှာဖွေရေးအလဂိုရီဇင်အတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်အချက်ပေးများအနက်အချိတ်အဆက်များနှင့်ကိုးကားချက်များသည်သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ရည်ညွှန်းချက်များသည်ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်ရရှိမှုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအရပေါ်ပေါက်လာသော SEO ကိုပိုမိုတိုးတက်စေသည့်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒများဖြစ်သည်။
၃။ သင်၏ PPC ကြိုးပမ်းမှုများ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေပါ။ PPC စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖန်တီးနိုင်ပြီးရလဒ်များကိုချက်ချင်းမျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုယူဆသောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ Google AdWords သည်အကြီးဆုံးသောဒေသတွင်းကြော်ငြာစျေးကွက်ဖြစ်ပြီး၊ ROI တစ်ခုခုကိုတွေ့မြင်ရန်၎င်းတို့သည်နယ်ပယ်၌ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ တစ် ဦး pay-per-click မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို run လူတစ် ဦး သည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်မှန်ကန်စွာပြသရန်မျှော်လင့်လျှင်အတွေ့အကြုံနှင့်နားလည်မှုလိုအပ်သည်။ အိမ်တွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ငွေစုဆောင်းရန်အထောက်အကူဖြစ်ပုံရသော်လည်းရေရှည်တွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် PPC လုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး ကိုငှားရမ်းရန်လိုအပ်သည်။
4. ရုပ်ပုံတွေကကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရွေ့လျားနေတဲ့ရုပ်ပုံတွေကပိုကောင်းတယ်။ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်အားကုမ္ပဏီနှင့်ယခင်ကအလုပ်လုပ်ဖူးသူများ၏ထောက်ခံချက်များ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီ၏ရပ်တည်ချက်ကိုဖော်ညွှန်းသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အမှတ်တံဆိပ်အားအသိအမှတ်ပြုရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်ဗွီဒီယိုများသည်၎င်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုတွင်ထိုကဲ့သို့သောစာရွက်အစွန်အဖျား၊ အခမဲ့ဘဏ္adviceာရေးအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ဆိုက်တွင်လျှော့စျေးကူပွန်မည်သို့ရယူရန်အကြံပြုချက်တစ်ခုထည့်ရန်သတိရရမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊ ဗီဒီယိုဟာမျှော်လင့်ထားသလောက်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဂူဂဲလ်သည်ယူကျုချန်နယ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြည်တွင်းရှာဖွေရေးစျေးကွက်၏ကြီးမားသောဝေစုကိုရယူရန်ကြိုးစားနေသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်လူကြိုက်များသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အနှစ်တစ်ထောင်မှ 5. စျေးကွက်။ လက်ရှိတွင်ခန့်မှန်းခြေအနှစ်တစ်ထောင်နှစ်သန်းပေါင်း ၈၆ သန်းရှိပြီး၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းရသောနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်းတို့အကြိုက်ဆုံးမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှတဆင့်၎င်းတို့ကိုလက်လှမ်းမမှီပါက၎င်းသည်အဖွဲ့သို့မရောက်ရှိနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာပစ်မှတ်ထားသောမိုဘိုင်းကြော်ငြာများသည်ကြော်ငြာများအတွက်စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်၏ထက်ဝက်ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာမှာဒေသခံ SEO ၀ န်ဆောင်မှု များအပေါ်မှီခိုရန်ဖြစ်သည်။ ဤစာမူတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်ငါးဆင့်သည်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေရန်နှင့်စီးပွားရေး၏ ROI ကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။